पानीको महसुल पनि इन्टरनेटबाट तिर्न मिल्ने सुविधा - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
पानीको महसुल पनि इन्टरनेटबाट तिर्न मिल्ने सुविधा
चैत ११, २०७४ 430 इटहरी/काठमाडौं
विभिन्न क्षेत्रमा प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै खानेपानी उपभोक्ता संस्थामा पनि यसले प्रवेश पाएको छ । पछिल्लो समय सुनसरीको इटहरीका उपभोक्ताले इ–सेवामार्फत महसुल भुक्तानी गर्न सुरु गरेका हुन् ।
इटहरीस्थित इटहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले अनलाइनबाटै महसुल तिर्न सक्ने गरी सेवा सुरु गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति प्राप्त कम्पनी इ–सेवाबाट महसुल तिर्न सुरु गरिएको छ ।
प्रविधिको युग भएकाले यसको उच्चतम उपयोग गर्दै प्रविधिमैत्री बनाइएको संस्थाका अध्यक्ष रामप्रसाद चौलागाईंले बताए । निकै टाढाबाट ४० रुपैयाँ तिर्न ५० रुपैयाँ खर्च गरेर आउनुपर्ने बाध्यता थियो, अब त्यो समस्या हुने छैन,’ उनले भने, ‘इ–सेवाबाट भुक्तानी गर्न मिल्ने भएपछि निकै सहज भएको छ ।’
यसैगरी, यसअघि भक्तपुरको बालकोट र दधिकोट, कास्कीकोे लेखनाथ, नवलपरासीको प्रगतीनगर, गोरखाको पृथ्वीनारायण खानेपानी संस्था, तनहुँको दमौली र बेलचौतारा, मानगढ विराटनगर, इन्द्रपुर मोरङ, बुधबारे, पर्वतको कुश्मालगायत खानेपानी संस्थाले अनलाइनबाट भुक्तानी गर्ने सेवा सञ्चालनमा ल्याएका थिए ।
अनलाइनबाट भुक्तानी गर्न सकिने र कार्यालय प्रयोजनमा पनि वाटरमार्क नामक सफ्टवेयर प्रयोग गरेर सेवालाई प्रभावकारी बनाउदै लगिएको छ । खानेपानीको मिटर रिडिङ ‘मिटरमार्क’ नामक मोबाइल एप्लिकेसनबाट गर्न सकिन्छ । उपभोक्ताले आफ्नो मोबाइल तथा इन्टरनेटबाट महसुल भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।
सन् २००९ देखि सञ्चालनमा आएको इ–सेवाले देशका सबै जिल्लामा सेवा दिँदै आएको छ । मोबाइल तथा इन्टरनेटबाट भुक्तानी गर्न सकिने इ–सेवाका मुलुकभर ३० हजार बढी जोन प्वाइन्ट छन् । इ–सेवाबाट मोबाइल रिचार्ज, टपअप, बिजुली, खानेपानीको बिल भुक्तानी, एयरलाइन्स र बस टिकट, फिल्मका टिकट खरिदजस्ता सयभन्दा बढी सुविधा लिन सकिन्छ ।